Modely sy lamaody - ny nofinofy ho lasa supermodel
Modely - Ny nofinofin'ilay supermodel
Ny lamaody sy ny maodely - fitambarana mahomby
Ny tsy fahalavorariana no fironana
Ny fomba sy ny lamaody dia manjary manandanja eo amin'ny fiarahamonintsika. Saika ny olona rehetra no mitady endrika tonga lafatra, nofinofy olona tonga lafatra na miasa amin'ny fanatsarana ny fahatsiarovan'izy ireo ny fombany.
Ny endrika lamaody dia lasa fanehoana ny toetran'ny tenany manokana, miaraka amina fironana maro hanehoana ny endriny manoloana ireo mpanangom-bokatra malaza na fanta-daza izay mampiseho ny endriny farany amin'ny arabe na ny catwalk. Manokana, ireo antsoina hoe supermodels - izay mifandray amina tontolon'ny lamaody - dia mitana andraikitra lehibe eto.
Ireo mpamorona erak'izao tontolo izao dia tsy tokony hampiseho fahaiza-mamorona, fa miankina amin'ny modely na mannequin manan-talenta izay heverina fa hitondra ny fironana vaovao amin'ny catwalks an'izao tontolo izao. Izany dia mahatonga azy io tsy ho vita mihitsy ny maka sary an-tsaina ny seho lamaody raha tsy misy ny maodely malaza, izay amin'ny alàlan'ny fisehoany dia matetika no lasa malaza tahaka ilay mpamorona azy.
Ny vatan'ilay maodely ihany no anaovan'ny endrika endrika ny mason'ny mpamorona ary manaitra ny saina izay noheverin'ilay mpamorona lamaody rehefa namorona ny endrika izy. Na fihantsiana, kanto na vehivavy. Ny lamaody dia manatratra tanjona tena tsy mitovy ary afaka manaitra ny fahatsapana samihafa amin'ny mpijery na ny mpitafy ary koa miteraka hafanam-po sy fandavana.
Mazava ho azy, ity dia mahasoa ihany koa ireo maodely, izay miakatra tampoka amin'ny alàlan'ny fitafiana mahavariana na fampisehoana lamaody ary ekena ho mpanangom-bokatra ataon'ny mpankafy lamaody erak'izao tontolo izao.
Hatramin'ny taona 90 farafaharatsiny dia lasa superstar ny modely. Na i Claudia Schiffer na i Naomi Campbell. Ireo mannequins tsy dia voamarika teo aloha dia ny tampon'ny fahatsiarovan-tena amin'ny hatsarana sy ny fomba ary ny maodely ho an'ny tovovavy. Tsy dia nisy fiovana firy tamin'io lafiny io mandraka androany. Ny tovovavy manerantany dia mbola manonofinofy ho lasa supermodel ary hanaiky betsaka amin'izany.
Na fampisehoana casting na masoivoho maodely - misy fomba maro ankehitriny hanombohana modely na farafaharatsiny mba hanandramana voalohany. Tsy isalasalana raha ho lasa malaza toa an'i Schiffer na Klum ianao amin'ny farany.
Rehefa dinihina tokoa, amin'ny maha supermodel anao dia mila mahafeno fepetra maro ianao. Matetika ny vatana tonga lafatra dia raisina, endrika tsy misy tomika ary ny faralahy faran'izay mety antitra. Na izany aza, ny fahatakarana ny mampiavaka ny maodely dia niova be tato anatin'ny taona vitsivitsy.
Satria ny faniriana modely saika tonga lafatra izay mampiseho ny tenany amin'ny endrika fanamiana, raha lazaina, dia nihena be. Ireo maodely antsoina hoe plus plus size dia mandresy ny tontolon'ny lamaody ary ireo masoivoho ary ny mazoto dia mitady maodely mihoampampana sy olona miavaka amin'ny mampiavaka azy.
Ka na ny kilema kely heverina na kilao kely loatra aza dia tsy eo amin'ny lalan'ny asa modely mahomby intsony. Saika ny olona rehetra amin'izao fotoana izao dia manana izay ilaina mba hankalazana ny fahombiazana amin'ny maodely. Na inona na inona taona, lanja na habe ary anton-javatra hafa.
Farany, ny hany zava-dehibe dia ny fandraisanao andraikitra voalohany ary hinoanao ny tenanao sy ny nofinofinao hiditra amin'ny tontolon'ny lamaody ho maodely mahomby.
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 30. Jolay 2021 5. September 2021 Sokajy LifestyleKeywords Ny nofin'ilay supermodel, lamaody, modely, Models, Supermodel
indray Lahatsoratra taloha: Ankizy sy ny mahaliana ny fiara lehibe
more Lahatsoratra manaraka: Boky ho an'ny ankizy - ny famakiana mafy dia mampiroborobo ny fahaizany miteny
Mamaky boky - manan-danja ho an'ny ankizy
Willi Wotonder sy ilay renibeko dune
Playhouse - Inona no hotadiavina rehefa mividy
Hehy - Milaza amin'ny ondry amin'ny mpamono bozaka ny ondry
Fampianarana, akaninjaza & sekoly (27)
mihinana sy misotro (7)
Fianakaviana & fiaraha-miasa (12)
Fialam-boly & fialamboly (13)
Trano sy trano (5)